Home Wararka Farmaajo oo looga yeeray dalka Qatar! Maxaa soo kordhay?
Madaxweynaha xilkiisa dhaamaday Farmaajo ayaa waxaa looga yeeray dalka Qatar iyada oo lagu wargaliyay inuu sida ugu dhaqsiyaha badan leh uu ku tago dalka Qatar.
Amarka ka soo baxay Amiirka dalka Qatar ayaa ah mid la xiriira arimaha doorashooyinka iyo doorka ay dowlada Qatar ku leedahay. Waxaa maalinba maalinta ka danbeeysa isa soo taraya walwalka caalamka ka qabo in dalka Soomaaliya ay ka dhaco dagaal sockeye oo salka ku haya arimaha doorashooyinka.
Farmaajo oo wato wafdi kooban ayaana ku wajahan dalka Qatar. Lama oga waxadowlada Qatar ay kala hadli doonto Farfmaajo laakiin warar xo’ogaal ah oo ay heshay MOL ayaa sheegaya inay safarkaan uu yahay mid ay ka danbeeysay dowlada Maraykanka oo dooonaysa in xal deg deg ah loo helo khilaafka ka taagan arimaha doorashooyinka.
Previous articleSomali premier pledges election transparency amid political tensions
Next articleWar Degdeg ah: Ciidan Somaliyeed oo Adis Abeba loo Dirayo.
Gud. Bangiga Dhexe oo saacado kooban Kheyre kula shiray Dh/Mareeb? Maxuu...